Laptọọpụ nwere i3 processor: ụdị kacha mma na ọnụ ala
Ọ bụrụ na ị na-eche echiche ịzụrụ a ọnụ ala laptọọpụ, mgbe ahụ, ị ​​kwesịrị ị na-atụle ohere nke na-enweta otu n'ime ụdị nke i3 laptọọpụ nke dị.
Ụdị akụrụngwa a na-enye nnukwu uru ma e jiri ya tụnyere nhọrọ ndị ọzọ dị ọnụ ala, ịrụ ọrụ dị mma iji mee ka batrị dị ogologo oge, ma na-arụ ọtụtụ ngwanrọ dị iche iche.
1 Laptọọpụ i3 kacha mma
2 Ụdị laptọọpụ i3 kacha mma
3 Kedu onye kwesịrị ịzụta laptọọpụ i3?
4 I3 ma ọ bụ i5?
5 Laptọọpụ I3 nwere 8GB nke RAM na SSD, nhazi ọkacha mmasị
6 Ebe ị ga-azụta laptọọpụ i3 dị ọnụ ala
7 Kedu mgbe ịzụrụ laptọọpụ i3 dị ọnụ ala?
Laptọọpụ i3 kacha mma
Acer Gbasara 3 A315-56 -...
Ụdị laptọọpụ i3 kacha mma
La akara laptop dị mkpa, Ebe ọ bụ na ụdị nke ihe ndị ọzọ na-agbakọta na ngwá ọrụ ga-adabere na ya, na ODM a họọrọ maka ịmepụta ngwá ọrụ, ya mere àgwà na ntụkwasị obi. Enwere ọtụtụ ụdị nke i3 laptọọpụ pụtara ìhè, dị ka ndị a ...
Lenovo bụ otu n'ime ndị na-ekesa laptọọpụ kacha ukwuu. Ọ bụ akara China nke, n'agbanyeghị na ọ dị nso nso a, nwere nnukwu ihe nketa n'azụ ya. Yabụ na ọ bụ ezigbo ụlọ ọrụ ịtụkwasị obi maka laptọọpụ nwere ezigbo uru maka ego.
Ọ bụ ezie na e hiwere ika ahụ na 1984 dị ka Akụkọ mgbe ochie, ọ gaghị ewere nnukwu nzọụkwụ ruo mgbe enwetara azụmahịa nke kọmputa nkeonwe site na IBM na 2005 (ThinkPad line), ka emechaa nweta NEC Pọtụfoliyo nke teknụzụ ekwentị mkpanaaka, wee weghara Medion (na-aghọ onye na-ere akwụkwọ ndetu nke atọ na-esote Acer na HP), na-emecha nweta ya na Motorola Mobility iji mee ka mpaghara mkpanaka gị sie ike, wdg.
Na mgbakwunye, Lenovo na-enye otu n'ime nnukwu enye na ahịa, na a otutu nke ranges ịhọrọ site, si otú na-enye ihe ngwọta na-emegharị na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụla ụdị onye ọrụ: nzuzo, ụlọ ọrụ, gamer, wdg.
HP (Hewlett-Packard) ọ dịghị mkpa ọtụtụ okwu mmeghe. Tọrọ ntọala na 1939 site n'aka William Hewlett na David Packard, raara onwe ya nye site na mmalite na ngwa elektrọn. Ọ bụ otu n'ime ụlọ ọrụ IT kachasị ama ama, ma nwee aha ọma maka nrụpụta ya, ịdịmma ya na arụmọrụ ya n'ọtụtụ ngwaahịa ya.
Enwere ike ibugharị HP 250 G8 ...
Laptọọpụ HP 15S-FQ2160NS ...
Kemgbe 2015, e kewara ya na ụlọ ọrụ abụọ dị iche iche. N'otu akụkụ bụ HP Inc., raara onwe ya nye na usoro obibi akwụkwọ na kọmputa nkeonwe, na n'aka nke ọzọ bụ HPE (HP Enterprise), nke raara nye sava, nchekwa, netwọk, na ọrụ azụmahịa. Taa, HPE na Lenovo bụ abụọ n'ime asọmpi kachasị na kọmpụta na-arụ ọrụ dị elu. Ọbụna karịa kemgbe HPE zụtara Cray a ma ama.
Tinyere Lenovo na Acer, ọ bụ ihe ọzọ nke ndị na-ere laptọọpụ kasị ukwuu nke ụwa, na ụdị gbakwasara iji gboo mkpa dị iche iche. Dị ka anyaụfụ na ihe nlere anya, inye obere nha, slim na mkpagharị ka ukwuu; Pavilion, maka ndị ọrụ ụlọ; ProBook maka Azụmahịa, na-elekwasị anya na nchekwa, ịdịmma na akwụkwọ ikike ịgbatị; Elitebook nwekwara maka ụlọ ọrụ na ndị nweere onwe; Omen maka ndị egwuregwu; wdg.
ASUS bụ otu n'ime ndị na-emepụta motherboard kasị ukwuu. Ezi onye ndu na ngalaba a. Ụlọ ọrụ Taiwan ahụ chọkwara ịgbasa azụmahịa ya na mpaghara ndị ọzọ, dị ka kaadị eserese, ngwaọrụ anya, ihuenyo, sava, ngwaọrụ mkpanaka, projectors, robotics, na ngwaahịa teknụzụ ndị ọzọ.
Akwụkwọ ndetu Asus Vivobook...
Laptọọpụ ha anọwo na-ewu ewu maka ekele àgwà ya, imewe na ihe ọhụrụ. Na mgbakwunye, ha nwere ezigbo nkwado na oke dị iche iche iji meju ụdị ndị ọrụ dị iche iche: Zenbook (ultrabooks), VivoBook (maka multimedia), ma ọ bụ oke TUF ha (maka egwuregwu). Na mgbakwunye, a na-ahụkwa nne nne ha n'ime ụdị nke ha, nke bụ ozi ọma…
Kedu onye kwesịrị ịzụta laptọọpụ i3?
A na-ezubere laptọọpụ i3 maka ndị ọrụ na-achọ kọmputa isi na ọnụ ala. A na-akpọ ha ọkwa ntinye, ya bụ, ọkwa isi ma ọ bụ ntinye. Nke ahụ pụtara na ha ga-enwe ezigbo arụmọrụ iji na-agba ọsọ sọftụwia dị ka ụlọ ọrụ dị ka Office, nchọgharị, nkwanye, ọrụ ịntanetị dị ka email, ịde blọgụ, imewe webụ, na ntụrụndụ mgbasa ozi.
Ya bụ, ọ dị mma maka ndị ọrụ niile ha adịghị mkpa a oké arụmọrụ na ha na-eji kọmputa ele ozi, gaa na ibe weebụ, kirie ihe nkiri / ihe onyonyo / ụda, maka ndị ọrụ ụlọ ọrụ na ụmụ akwụkwọ, ma ọ bụ gwuo egwuregwu vidiyo nke chọrọ obere ego.
Dịka ọmụmaatụ, ya na a i3 na 4GB RAM nhazi, ị nwere ike ịme egwuregwu vidiyo dị ka Far Cry 3, GTA V, Assassin's Cred IV Black Flag, wdg. Nke ahụ bụ, aha AAA, mana site na afọ ole na ole gara aga, ebe ọ bụ na aha kachasị ọhụrụ ga-achọ ntakịrị arụmọrụ.
Ikpe ọzọ ebe laptọọpụ i3 dị ọnụ ala nwere ike ime uche bụ maka ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ kọmputa iji banye, ma ọ bụ buru ya gaa n'ụlọ ndị ahịa gị iji gosi ụfọdụ ụdị ọdịnaya, mee ule netwọk, wdg, ị chọghị itinye ego buru ibu na ọrụ. ngwá ọrụ. Na laptọọpụ i3 ọ ga-ezuru maka ọrụ ndị ahụ, ọ ga-enye gị ohere ịchekwaa iji ya maka ebumnuche ndị ọzọ dị mkpa.
I3 ma ọ bụ i5?
El I5 isi Ọ bụ usoro nhazi nke ọzọ, nke ezubere maka ndị ọrụ etiti na-achọ nguzozi n'etiti arụmọrụ na ọnụahịa, na ndị na-eji ha arụ ọrụ dị iche iche, site na ndị a kpọtụrụ aha n'elu nke i3 laptọọpụ nwere ike ịrụ, na-egwu egwuregwu nwere aha ndị ọzọ ugbu a. . N'ụzọ doro anya, n'ọnọdụ maka ịrụkwu ọrụ ahụ, ha ga-adị ntakịrị ọnụ karịa i3 mana, ka dị ọnụ ala karịa i7.
Iji nye gị echiche doro anya, na uru nke i3 na i5 bụ:
Ahịa: Laptọọpụ i3 ga-adị ọnụ ala karịa laptọọpụ i5 na nhazi nha anya. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọghị ịrụ ọrụ dị elu, i3 nwere ike ikwe ka ị chekwaa ma ghara imefusị ego nke ị na-agaghị enwe ike iji ohere maka ngwa ndị ị ga-eji ya.
Nri: site n'inwe obere oge elekere, yana obere cores na-arụ ọrụ, ndị nhazi a ga-eri obere ike. Ya mere, batrị dị na laptọọpụ i3 ga-adịru ogologo oge.
temperatura: mgbe ị na-arụ ọrụ na obere cores na-arụ ọrụ, obere elekere, na voltaji dị ala, n'ozuzu, okpomọkụ ga-adịkwa ala. Nke a pụtara na ha ga-ekpo ọkụ dị ntakịrị ma ọ bụ na ha agaghị achọ usoro jụrụ oyi dị ike. Al dị mkpa mgbe ọ na-abịa na laptọọpụ.
Na usoro nke ọghọm ya nke i3 na i5:
Ọrụ: Site n'inwe ọtụtụ cores na-arụ ọrụ na ugboro elekere, arụmọrụ nke i5 ga-adị elu karịa nke i3.
Teknụzụ: Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịdịgasị iche site na ụdị, mgbe ụfọdụ i3 nwere ike ịnwe ụfọdụ atụmatụ ma ọ bụ teknụzụ nwere nkwarụ. Dịka ọmụmaatụ, n'ọnọdụ ụfọdụ, ha nwere ike ghara HT, ma ọ bụ n'oge gara aga Intel VT nwekwara nkwarụ na ụfọdụ ...
Laptọọpụ I3 nwere 8GB nke RAM na SSD, nhazi ọkacha mmasị
Otu ntọala ọkacha mmasị. Ihe kpatara ya bụ na a Laptọọpụ i3 nwere 8GB nke RAM na SSD ọ bụ ntọala ziri ezi nke nwere ike ịnapụta arụmọrụ karịa nke ọma. Site na njirimara ndị a, ọ ga-enye gị ohere ịme ngwa ngwa niile a kpọtụrụ aha n'ụzọ dị mfe na enweghị nsogbu ọ bụla.
Ike ime 8GB Ram Ọ bụ ọnụ ọgụgụ mara mma maka ọnụọgụ cores na ihe ndị na-emepụta Core i3 na-eme nke bụ isi ebe nchekwa. Buru n'uche na nhazi ebe nchekwa buru ibu agaghị adị oke mma, ebe ọ bụ na i3 agaghị eji ya nke ọma ma na-emefu ego na ịzụrụ laptọọpụ gị (ọ gwụla ma ịchọrọ RAM ọzọ maka ngwa ngwa).
Na mgbakwunye, ekele maka SSD, ọ ga-ekwe omume ịme ngwa ngwa mmalite kọmputa na nbudata mmemme, ebe ọ bụ na ịnweta n'ụdị draịva steeti siri ike na-adị ngwa ngwa karịa na HDD nkịtị.
Ebe ị ga-azụta laptọọpụ i3 dị ọnụ ala
Enwere ike ịchọta akụrụngwa akara nwere ụdị nhazi ndị a n'ụzọ dị mfe. Ị nwere ike ịzụta laptọọpụ i3 dị ọnụ ala n'ụlọ ahịa dị ka:
Amazon: logistics ibu bụ otu n'ime ndị kasị ibu nyiwe ebe ị nwere ike ịhụ a nnukwu iche iche nke ụdị na ụdị, nakwa dị ka nnọọ asọmpi ahịa. Dị ka ọ bụghị ụlọ ahịa, ma onye intermediary nke ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-ere, ị nwere ike ịhụ ndị kasị mma ahịa mgbe niile. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na ị nwere Prime, mbupu ga-abata n'otu ụbọchị ma ọ bụrụ na ha dị. Ma ọ bụrụ na ihe anaghị arụ ọrụ maka gị, ị maralarị na ikpo okwu na-enye otu n'ime ihe ndị kasị mma na-ekwe nkwa, ọbụna na-eweghachite ego gị n'ụzọ zuru ezu na-enweghị inye nkọwa.
Ụlọikpe Bekee: bụ ụzọ ọzọ. Agbụ Spanish nwekwara ezigbo nhọrọ nke ụdị na ụdị nke i3 laptọọpụ. Ị nwere ike ịhọrọ ma ụdị ịzụrụ ihu na ihu n'ebe ọ bụla n'ime isi ihe ndị a kesara na mpaghara ala Spanish, yana ụdị ịntanetị. Na mgbakwunye, ha nwere ezigbo ọrụ. Naanị ihe na-adịghị mma bụ na ha enweghị ọnụahịa kacha mma, ma ọ bụrụ na ị na-atụ anya onyinye ma ọ bụ nkwalite dị ka Tecnoprecios.
nrutu: yinye French nwekwara usoro ịzụrụ ihu na ihu ma ọ bụ n'ịntanetị. N'ọtụtụ ụdị na ụdị ịhọrọ maka laptọọpụ i3 gị, yana ọnụ ahịa na-adịghị njọ.
Ihe PC: Ọ bụ ụlọ ahịa ọzọ a ma ama, ha na-agbasokwa ụdị ahịa azụmahịa Amazon, bụ ụlọ nkwakọba ihe logistics sitere na Murcia iji kesaa ọtụtụ ngwaahịa sitere na ndị na-ekesa ndị ọzọ. Ya mere, ị nwere ike ịhụ nnukwu onyinye nke ngwaahịa na ngwaahịa. Na mgbakwunye, ha nwere ezigbo nkwado na enyemaka maka ndị ahịa ha, na mbupu na-abụkarị ngwa ngwa.
mediamarkt: Agbụ German na-apụta maka ọnụ ahịa dị mma na nkà na ụzụ na okwu okwu ya "na abụghị m onye nzuzu." Ha nwere ọtụtụ ụdị na ụdị nke i3 laptọọpụ, ma nke bụ eziokwu bụ na ha enweghị ndị kasị ibu n'ime ụdị. Ọzọ, ị nwere ike họrọ n'etiti ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ma ọ bụ nke ihu na ihu, dịka mmasị gị siri dị.
Kedu mgbe ịzụrụ laptọọpụ i3 dị ọnụ ala?
Enwere oge ụfọdụ nke afọ ebe ị nwere ike ịhụ laptọọpụ i3 dị ọnụ ala karịa, yana nnukwu nyere na nkwalite, iji chekwaa na ịzụrụ:
Black Friday: na Fraịde, Nọvemba 26 nke afọ a, Black Friday a ma ama ga-abata, ebe a na-eme nnukwu ego na nnukwu ụlọ ahịa na obere ụlọ ahịa. Ọ bụ nnukwu ohere ịchọta ngwaahịa ị na-achọ na ọnụahịa nke nwere ike na-eri ihe ruru 20 ma ọ bụ 30% na-erughị ụbọchị ọ bụla ọzọ.
Ụbọchị MbụAmazon ekwuputabeghị ụbọchị maka afọ a, mana ọ na-abụkarị n'ime izu mbụ ma ọ bụ abụọ na Julaị. Ụbọchị nke ị ga-enwetakwa nnukwu mbelata ma ọ bụ nkwalite ọkụ na ọtụtụ puku ngwaahịa maka ịbụ onye so na ọrụ Prime.
Cyber ​​Monday: Mọnde na-esote mgbe Black Friday gachara Cyber ​​​​Monday, ya bụ, Mọnde, Nọvemba 29. Taa ọ bụ oge azụmaahịa dị n'ịntanetị, nke na-ebelata ọnụ ahịa ha n'otu ụzọ ahụ na ihe na-eme na Black Friday. Ọ nwere ike ịbụ ezigbo ohere ma ọ bụrụ na ị tụfuru azụmahịa Black Friday ma ọ bụ na ịchọtaghị ihe ị na-achọ.
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Nhazi » I3 laptọọpụ